Usuku lukaTrump | Scrolla Izindaba
IMelika iye okhethweni ngoLwesibili – ukhetho olubaluleke kunalo lonke olwake lwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
UDonald Trump uvuselele ezombusazwe, waphihliza izikhungo, waqamba amanga angapheli, futhi wenza noma yini ukuze aqhubeke nokuphatha.
Indaba ebe nkulu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kube yimizamo yeqembu lakhe i-Republicans, ebizama ukuvimba abantu ukuthi bavote.
Isehlakalo sakamuva esenzekile, umshini oyi-robot ufonele abantu abayizigidi eziyishumi ubeluleka ngokuthi, mabahlale emakhaya.
Iqembu le-Republicans likwenza kwaba nzima ngazo zonke izindlela ukuthi abantu bavote ngoba bayiqembu labantu abadala, abamhlophe – futhi abesaba ukufuduka eMelika okuzobenza babe yingcosana.
Ngakho-ke iqembu eliphikisayo i-Democrats – kanye noyilunga leqembu uJoe Biden – bebelokhu benza konke okusemandleni abo ukwenza abantu bavote. Kubandakanye ukubiza owayenguMengameli wezwe uBarack Obama ukuthi ezokwenza adume ngakho.
Izinombolo zikhombisa ukuthi uBiden uyawina kodwa uhlelo lokuvota lwezifunda ezingama-50 zaseMelika – olucheme neqembu le-Republicans – lungase lucasule abaningi.
Uma uTrump engaboshwa, uzibeka engcupheni yokushushiswa ngamacala okukhwabanisa nawobugebengu. Ngakho-ke amathuba akhe, kanye nawo wonke umhlaba, awanakuba ngaphezu kwalokhu.